HUAWEI Tarisa 3, ine HarmonyOS ndiyo smartwatch yekureva | Gadget Nhau
HUAWEI Tarisa 3, ine HarmonyOS ndiyo smartwatch yekureva
Miguel Hernandez | 26/06/2021 20:04 | Yakagadziridzwa ku 26/06/2021 20:56 | Zvipfeko zvinopfeka, Gadgets, SmartWatch
Hatina kuunza wachi yakangwara kune yedu webhusaiti kwechinguva ikozvino, saka nhasi izuva rakanaka kukuperekedza pamwe nekuongororwa kweazvino uye inonyanya kugadzirisa smartwatch pamusika, iyo Huawei Watch 3, iyo inounza zvakawanda kupfuura hardware uye dhizaini Kumusoro-kumagumo, inoperekedzwa neHarmony OS 2.0, iyo inoshanda sisitimu iyo iyo Huawei inoda kuzvibvisa kubva paGoogle.
Ndine chokwadi chokwadi kwete, saka tibatane nesu mune ino ongororo.
Chekutanga pane zvese uye sekunge nguva zhinji, tinokuyeuchidza kuti tine ongororo yevhidhiyo inowanikwa pane yedu chiteshi YouTube, saka usarasikirwa nemukana wekunyorera uye tarisa kuongororo iyi kweinenge hafu yeawa mausingazopotsere ruzivo.
Kana iwe uchizvifarira, chitenge pamutengo wakanakisa> BUY
1 Dhizaini: Yakawanda premium, yakawanda Huawei
2 Hardware uye software, HarmonyOS ndiyo icing pane keke
3 Screen uye kubatanidza, hapana chinoshaikwa
4 Sensor kwese kwese uye yakawanda yekudzidziswa
Dhizaini: Yakawanda premium, yakawanda Huawei
Chishandiso chine chinenge chakatenderedza kutenderera dhizaini imwe kune izvo zvinopihwa neApple. Huawei's smartwatch yakanyanyisa kuita uye Iine zviyero zve 46,2 x 46,2 x 12 millimeter izvo zvakashamisa nehukuru hwazvo, chimwe chinhu chisina kujairika murudzi urwu rwewachi. Izvi zvinokatyamadza, asi isu tinogona kutaura kuti hazviiti kuti isu "tanyanya" kuva.
Unogona kuitenga pamutengo wakanakisa paAmazon
Kune iro chikamu, wachi ine yakasviba nhema yesimbi chassis mune iyo shanduro yatakaedza uye nesilicone tambo. Isu tinorangarira kuti Huawei ichavhurawo vhezheni yakanyatsovakwa mu titanium, ine tambo mune zvakafanana mazwi uye isu tinokwanisa kutenga tambo dzakasiyana neyakareruka yekuvhara system pane zvakajairwa nzvimbo dzekutengesa. Pakurema, 52 gramu chete, iyo Huawei Tarisa 3 inoshamisika nekureruka kwayo. Iyo yekuvaka yakanaka kwazvo, inonzwa shoma nenzira imwecheteyo iyo hwaro hwakagadzirwa neyakajeka epurasitiki / zvedongo zvinhu. Hazvitore kurapwa kwakanyanya kuti uone kuti icho chigadzirwa chepamusoro-kumagumo.
Hardware uye software, HarmonyOS ndiyo icing pane keke
Kuita mabasa akajairwa, iyo Asia femu yakasarudza kuiseta yayo processor, iyo HiSilicon Hi6262, saka mune iyi vhezheni haina kukwirisa maprosesa kubva kuKirin renji, ayo ari emidziyo iyo inoda masimba akakwirira. Tine 2 GB ye RAM kuperekedza processor uye kunyangwe 16 GB yekuchengetedza Yakazara kune ese mashandisirwo uye inoenderana audiovisual zvemukati
Basa kubvisa mvura
Kuramba kusvika ku5 ATM
Iyo Inoshanda System yeichi chishongo chekristaro iri HarmonyOS 2.0, Chishandiso chekutanga cheHuawei neiyi system inosvika kune veruzhinji. Kunzwa kwedu kwakajeka HarmonyOS inofamba mushe uye hatina kusangana nekukanganisa - kutaura zvazviri, inokwikwidza makwikwi acho zvakananga, nemitengo inomhanya yakakwira kupfuura Wear OS uye dzimwe nzira dzeSamsung. Iyo ine yayo Huawei App Garari yeWatch, zvinosuwisa kuti hatina kuwana chishandiso chinokwezva zvakakwana kutora mukana weiri basa. Zvisinei, iwo maapplication akaiswa natively anga achiratidzika kunge akakwana, pamwe nekubatanidzwa kwayo neiyo Huawei Hutano application yatinokurudzira kuisa kubva kuApp Gallery.
Screen uye kubatanidza, hapana chinoshaikwa
Isu tine yakakurumbira pani 1,43-inch AMOLED iyo inopa huwandu hwe 466 X 466 pixels, mukuguma isu tine 326 pixels padiki. Inopihwa nechinwiwa chinwiwa che 60 Hz, izvo zvinopfuura zvakakwana kune smartwatch skrini. Kunyanya inosimbisa chokwadi chekuti isu tine yakakwira ye Zviuru zvechiedza zvekupenya, chimwe chinhu chinonyanya kuoneka panze apo patinogona kushandisa zvakanyanya kugona uku tichipiwa kuti mashandisirwo aro masikati machena akazara uye akakwirira, pasina fungidziro kana chero mhando dambudziko rakabva kwariri.
Nezve kubatanidza, isu tine kubatana 4G kuburikidza neSIM, iyo parizvino inongowirirana neshanduro dze Movistar uye O2, kusimudza mamwe matambudziko neOrange, Vodafone uye zvimwe zvigadzirwa. Isuwo tine NFC Kunyangwe isu tichiri vasingakwanise kubhadhara nekuti Huawei achiri kushanda pazvibvumirano nematanho ekubhadhara. Iva Bluetooth 5.2 uye WiFi 802.11n yezvese zvekubatana, chimwe chinhu chichatibvumidza humbozha hwekusarasikirwa nechinhu zvachose.
Sensor kwese kwese uye yakawanda yekudzidziswa
Tine zvese izvi zvakakura zvema sensors, saka tinopokana kuti unokwanisa kuita chero basa iro Huawei Watch 3 isingakwanise kuyera:
Ropa okisijeni yekuzadza sensor
Parizvino thermometer inongokwanisa kuyera tembiricha yeganda, asi mukati memwedzi waChikunguru tinogashira izvo zvinotibvumidza kuyera kudziya kwemuviri. Iyo barometer yakanyatsojeka uye zvakafanana zvinoitika nemamwe maseru ayo ayo Huawei Iyo yatove yakaratidza kushanda kwayo mushanduro dzakapfuura dzemawachi ayo akangwara.
Kana iri yekudzidzira isu tine anopfuura zana zana akasiyana, izvo zvinotipa mhedzisiro inovimbika muHuawei Hutano application. Iyi ndiyo wachi yakangwara yeiyo firm iyo ine yakanyanya kuwanda nhanho yemikana mune izvi nyaya.
Kuzvimiririra kwakavimbiswa kwechigadzirwa mazuva nemasimba ese akaitwa uye anosvika mazuva gumi nemana kana tichienda kunzira yekuchengetedza magetsi. Mukuyedzwa kwedu takawana mazuva maviri ekushandisa zvakanyanya uye nemazuva gumi nemaviri achatipa padanho rekuchengetedza magetsi, Huawei anotivimbisa kuti mune inotevera inotevera tinowana mhedzisiro yakavimbiswa neiyo brand.
Iyi Huawei Watch 3 inoita senge yekutanga litmus bvunzo yeHarmonyOS uye parizvino yapfuura, kutaura chokwadi, ruzivo rwevashandisi rwuri pamusoro kupfuura rwevazhinji vekare vhezheni yeApple Watch uye yakakwirira kupfuura Wear OS. Pasina mubvunzo, wachi ye369 euros (ine FreeBuds 3 sechipo) inosara padanho repamusoro yakamisikidzwa seyakanyanya kungwara kubva pane yangu maonero yeApple.
Yakatumirwa pa: 26 June we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 26 June we2021
Dhizaini yekutanga uye zvigadzirwa
HarmonyOS yakaratidza masimba akasimba uye kuyerera
Hapana chinoshaikwa padanho rehardware
Iyo App Gallery inoda kuwedzerwa mari
Kuzvimiririra hakusati kwave kuvimbiswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » HUAWEI Tarisa 3, ine HarmonyOS ndiyo smartwatch yekureva
Tora mukana wezviitiko zvinoshamisa pane zvigadzirwa zveOclean zvehunyanzvi hwekutsvaira